wararka maanta-arlaadii.net » DHACDOOYINKA
Dhacdo naadir ah ka taagan Magalada Muqdisho oo aad loola yaaban yahay
Dhacdo nooceeda aanan horay loo arkin, ayaa lagu soo waramayaa inay ka taagan tahay Isbitaalka Martiini ee Degmada Xamar weyne, halkaasi oo ay dhibaato ku hayaan Shimbiro aan noocooda horay loo arkin. Shimbirahan oo ka cad madaxa, inta kalena ka madow ayaa waxa ay ka imaanayaan...
Haweeney Canug Meyd Ay Dhashay Dartiisa Xabsi 30 sano ah Loogu sii Daayay
Teodora Vasquez oo ku nool dalkaasi El Salvador ayaa laga cafiyay xabsi soddon sano ah oo ay ku xukuneyd kadib markii ay dhashay cunug meyd ah sannadkii 2007-dii, waxaana go`aankan ka laabashada xukunkan gaaray maxkamadda sare ee dalkaasi. Gabadhan ayaa maalin ka mid ah sannadkii...
Nin Xaaskiisa Si Farsameysan Ugula Baxay Kilideeda
Booliiska dalka Hindiya ayaa xabsiga dhigay labo nin oo Walaalo ah , kadib markii ragaasi lagu eedeeyay in si farsameesan kili ugala baxeen Haweeney uu qabay mid kamid ah ragan la xiray. Ninka Xaaskisa kilada kala baxay ayaa la sheegay in xaaskiisa uu ka waayay lacag gabaati oo...
Ookiyaal Lagu aqoonsada dadka Dambiilayasha Oo La Soo saaray
Dalka Shiinaha ayaa horumar weyn ka gaaray Tiknoolajiyada casriga ah, waxa uuna dalkaasi si joogto ah usoo saaraan qalab casri ah oo wax badan ka taraya xaaladaha taagan. Shiinaha ayaa hada ku guuleestay in ay soo saaraan Ookiyaale casri ah oo ciidanka booliiska ka saacidaya in...
Bisad Salaada Jamaacada Dadka La Tukata Dalka Masar
QISO YAR OO CAJIIB AH. Mucjiso Rabbaani ah Bisad ayaa noqotay Sheekada ugu badan Xiligaan Xaafad ka tirsan Dalka Masar, Waxaa Dalkaasi ka socdo oo Dadku la yaaban yihiin markey Arkeen Bisad sugeyso Ninka Mas’uulka ka ah Masaajidka Salaad Subax kasta. Bisadaan ayaa sugto...
Naag Gubtay Guri Ay Degneyd iyo Sababta Keentay oo la ogaaday
Haweeney kunooleed Xaafada Coka Cola ee Degmada Yaqshiid ayaa dab qabadsiisay gurigii ay degneyd kadib markii la sheegay in Maseyr uu ku dhacay lana dirirtay ninkii qabay. Haweeneydan Maseyrsaneyd ayaa saakay dab qabadsiisay gurigii ay degneyd, waxa ayna gubtay qeyb kamid ah...
Milkiilaha Facebook oo sheegay in uu Hoos u dhac ku yimid isticmaalka Facebook
Asaasaha Facebook-ga Mark Zuckerberg ayaa sheegay in isbedela lagu sameeyay qaabka daalacashada wararka ee Facebook-ga ay sababtay inuu hoos u dhac ku yimaado dadka isticmaala Facebeook-ga. Mark Zuckerberg ayaa sidookale sheegay inay muhiim tahay in la qaado tallaabooyinkaasi, si...
Saynisyahano shegay in Caawa Dayaxa is bedel ku dhici doono Muda ka dib
Caawa waxa la filayaa dhacdo ugu yaraan labadi qarniba mar dhacda. Markii ugu dambaysay waxa ay dhacday 151 sano kahor oo ah 1866-dii. Maqribka saacadda Muqdisho marka ay tahay Laba iyo Toban Saac Afar iyo Toban Daqiiqo (18:14 ama 6:14pm), waxaa kulmi doono oo hal mar la arki...
Gabar Kaluumeesato Noqotay Kadib Markii Aabaheed Dhintay
Rayaan ayaa sheegtay: “Maalintaan shabaq helo waan ku jillaabtaa, maalintaan makaalin helana waan ku raadsadaa, haddii aan labadaba waayana ookiyaalo intaan xirto Ayaan badda gudaha ugu quusaa.” Ma aha shaqo ay waaya aragnimo u lahayd ama ay jecleyd, waxaana ku qasbay duruufta...
Ninka Aduunka Ugu dheer oo Masar kula kulmay Naagta Aduunka uhu Gaaban
Kulan cajiib ah ayaa waxaa uu maanta ku dhex maray caasimadda dalka Masar ee Qaahira ninka adduunka ugu dheer Sultan Koset (34-jir) iyo Jyoti Amge (24-jir). Labadan ruux oo dherer ahaan aad u kala fog ayaa islamarkiiba isla jaan-qaaday, dhererkuna ma noqon mid hakiya amaba...